mi3, mi4, minote, mipad ရဲ့ system ကို true dual boost on ပီး system 2ခုသုံးချင်သူများအတွက်.. « XMS-MMF
mi3, mi4, minote, mipad ရဲ့ system ကို true dual boost on ပီး system 2ခုသုံးချင်သူများအတွက်..
ကိုယ်သုံးမဲ့ဖုန်းရဲ့ recovery တွေကို သိထားတာက ကိုယ် rom version upgrade
လုပ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်.. rom version upgrade ကို updater ကနေ လုပ်လို့မရဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါတယ်.. ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် mi recovery က သူ့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်.. recovery link တွေကို အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်.. အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ph အားလုံးအတွက် လုပ်ပေးချင်ပေမယ့် တချို့ဖုန်းတွေက cwm ကို တိုက်ရိုက်ထည့်လို့မရသေးတဲ့ဟာတွေ ရှိနေသေးလို့ နောက်ပိုင်း ပြန်ပေါင်းထည့်ပေးပါ့မယ်..
system2 ခုစလုံးကို enable (TDB)true dual boost လုပ်ပေးပီး system တခုချင်းစီမှာ rom တခုစီထားလို့ရပါတယ်.. အရင်ဆုံး ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ cwm ကို အင်စတောလုပ်ပါ.ပီးရင် recovery ၀င်ပီး backup data လုပ်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်… ပီးမှ wipe သုံးမျိုး လုပ်ရပါမယ်.. wipe all data, wipe cache partition, ပီးရင် advanced ထဲကနေ wipe dalvik cache လုပ်ပေးရပါမယ်… ပီးရင်တော့ system 1 ကိုရွေးပီး stable or dev rom တင်ပါ. china rom or dev
rom နှစ်ခုစလုံးမှာဖြစ်နေရင် gapps crack ဖြစ်ဖို့ အလားအလာနည်းသွားပါမယ်… ပီးတော့မှ reboot now လုပ်ပေးပါ… supersu အတွက်ကတော့ supersu.zip ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ system2 က အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်… ဒါကြောင့် dev rom တင်စေချင်ပါတယ်… system2 ဆိုတာက တကယ်တမ်းတော့ backup system တခုအနေနဲ့ ရှိနေတာမို့ dev rom တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ota update မလုပ်ပါဘူး… dev rom တင်ထားမယ် ota update လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် recovery မှာ ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ပါ
system 1 မှာ အလုပ်လုပ်နေပါလိမ့်မယ်… Ota update အားလုံးက system1 ကို support လုပ်တာများပါတယ်.. ဒီတော့ fully rom ဒေါင်းပီးမှ recovery ကနေ system2 ကို install လုပ်တာ ပိုပီးအဆင်ပြေပါမယ်.
system2 မှာ stable rom တင်မယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားရင်တော့ supersu ကို
zip မသုံးဘဲ apk ကို playstore က ဒါမှမဟုတ် တခြားတနေရာကနေ ဒေါင်းပီး install လုပ်ပါ.. ပီးရင် သူက update လုပ်ဖို့ ပြောလာခဲ့ရင် normal/twrp ဆိုရင် normal ကိုရွေးပေးပါ.. reboot ကျပီး ပြန်တတ်လာရင် supersu အသုံးပြုလို့ရပါပီ… native root.zip ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း recovery ကနေသာ တင်ဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်...supersu.zip>>> http://www.mediafire.com/download/j6m11x4g4qr2acpsupersu.apk>>> http://www.mediafire.com/download/33cajkxj0x2dx4c
ကျွန်တော်သိသလောက် ကလိထားသမျှလေး ဖောက်သည်ချခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်… ဘာပဲလုပ်လုပ် your own risk မို့ သေချာလေး ဖတ်ပီး လုပ်စေချင်ပါတယ်...
အောက်မှာ recovery အကြောင်းနဲ့ ဒေါင်းရမယ့်လင့်တွေ ပေးထားပါတယ်….
Mi3w/c Mi4 w/c တွေမှာ အသုံးပြုတာက mi recovery version 2.0.1 အသုံးပြုထားပါတယ်... အသုံးပြုရတာ
လွယ်တယ်.... ခက်တာက external sd card ကဟာကို recovery ကနေ flash လို့ မရဘဲ
sd card ထဲမှာပဲ update.zip လို့ ဖိုင်နာမည်ပြောင်းပီး install update.zip
from sdcard ဆိုပီး သုံးလို့ရတယ်..... စစချင်း ဘာနဲ့ recovery mode သွားမလဲ...
ပေါ်လာရင် တရုတ်စာ နှစ်ကြောင်းနဲ့ အဂ်လိပ်တကြောင်း..... အင်္ဂလိပ်ကိုရွေး..... အထဲရောက်ရင် reboot now, wipe, install update.zip from sdcard, back main menu.... စသဖြင့် ကိုယ်အသုံး ပြုလိုတာကို ရွေးပီး သွားနိုင်ပါတယ်......
or twrp recovery သုံးချင်ရင်တော့ custom တင်လို့ရတယ်.... stabel verion မြှင့်လိုက်တိုင်း ပြန်တင်ပေးရမယ်... dev version မြှင့်ရင် ထပ်တင်စရာမလို.....
3g တွေမှာပဲ သုံးတယ်.... အားသာချက်က external memory card က zip ဖိုင်တွေကို flash လို့ရတယ်... သူကို ၀င်ပုံက အပေါ်နဲ့ ဆင်တူတယ်... ကွဲတာက recovery ထဲရောက်ပီးမှ choose ကို volum down key နဲ့ လုပ်ပီး enter က volum up ပါ......
# အားသာချက်... external sd card ထဲက ဖိုင်များကို flash လုပ်လို့ရ... wipe all data လုပ်လဲ apps မပျက်.. backup
& restore လုပ်လို့လဲရ……
Cwm philz recovery for mi note 4g single sim
redmi2cwm recovery…… http://www.mediafire.com/download/iw11bizse45i2fm
cwm recovery for mipad
ကနေ တိုက်ရိုက်တင်လို့ရပါတယ်..... updater ကနေ ဘယ်လိုဝင်ရမယ် ဆိုတာတော့ ပြောထားတာတွေ အများကြီးရှိခဲ့ တဲ့အတွက် ထပ်မရှင်းပြတော့ဘူးနော်…..
ကနေ တင်လို့မရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ သွင်းချင်တဲ့ recovery file ကို update.zip
လို့ပေးပီး internal storage ထဲကို ဘယ်ဖိုဒါမှ မထားဘဲ အပြင်မှာထားပါ ပီးရင် ဖုန်းကို power off လိုက်ပါ… ပီးရင် power+volume up အတူတူဖိထားလိုက်ရင် mi recovery ပေါ်လာမယ် အဲဒီ့ကနေမှတဆင့် install update.zip from sd card ကိုရွေးပီး အိုကေပေးလိုက်ရင် အင်စတော လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်… recovery ၀င်ဖို့ note 3g သမားတွေကတော့ power+volume down ပါ